Maxaad Kala Socotaa Adeegyadda Ay Bixiso Shirkadda Golis? | puntlandi.com
Monday, February 13th, 2017 | Posted by Pi
Maxaad Kala Socotaa Adeegyadda Ay Bixiso Shirkadda Golis?
Sahal – Xalka Ganacsigaaga
Anagoo marwalba ku taameyna inaan macaamiisha baahidooda daboolno waxaan soo saarnay laba adeeg oo casri ah kuwaas oo loogu talo galay macaamiisha ganacsatada ah. Adeegyadani waxay leeyihiin in lacago badan laysugu gudbin karo kana badan inta dadka caadigaa ay isticmaalaan. Akoonada Sahal ee ganacsatadu waxay qaban karaan lacag macquul ah oo laysla ogyahay.
Macaamiisha ku Ganacsata (bixinta biilasha)
Adeegaan macaamiisha ku Ganacsiga wuxuu u sahlayaa shirkadaha ganacsiga intay doonaan ba ha leekaadeene in macaamiishu ay lacagta ku bixiso oo shirkada ku siiso lacagta ay alaabta ama adeega uga qaateen si dhib la’aan ah. Adeegan waxaa loogu talo galay shirkadaha macaamiisha faraha badan leh iyo shirkad kasta oo jecel inay u sahasho macaamiisheeda inay adeega Sahal ku bixiyaan lacagta ay qabaan.
Ganacsatadu way ka faa’iidayaan adeegaan waayo waxay u sahlaysaa inay si fudud ku helaan lacagtooda kagana qaataan macaamiisha iyagoo una sahlaya macaamiisha naftooda inay si fudud ku bixiyaan lacagta ay qabaan. Lacagta macmiilku meel kasta oo uu joogo wuu bixin karaa hadii uu leeyahay Akoon Sahal ah lacagina ugu jirto akoonkooda Sahal.
Shirkadu badan ayaa adeega adeegsada oo waaweyn waxaana ka mid ah shirkadaha Caafimaadka, Waxbarashada, Ganacsiga yaryar, dukaamada, maqaaxiyaha iwm.
Ganacsi ku Macmiil (Bixin lacago badan)
Adeegaan wuxuu u sahlayaa ganacsatada iyo ururada inay diraan ama bixiyaan lacago badan oo ay kala siiyaan dad badan oo kala duwan, sida shaqaalaha, bixinta raasumaalka mulkiilayaasha, lacagaha loo dirayo dad meelo kala duwan kala jooga IWM.
Bixinta lacago badan, waa adeeg wacan oo sahlan si fududna loo isticmaali karo.
Adeega bixinta lacag wadareedka faa’iidooyin badan ayuu gaarsiiyey ganacsatada isticmaasha wuxuuna fududeeyey in dadka la gaarsiiyo lacagta si fudud, mida kale adeegaan waa aamin oo ururada iyo ganacsatadu lacagta si fudud oo aamin ah ay ku gaarsiin karaan dad meelo kala duwan kala jooga.
Mida kale adeegan waa mid kharash yar marka loo eego kuwa kale ee lacagta lagu kala bixiyo ee hada jira.
Diiwaan garee Sahal
Waxaad ka diiwaan gelin kartaa Sahal akoonkaaga si bilaash ah xarun kasta oo Golis ay dalka ku leedahay oo kuu dhow. Si aad u diiwaan garayso Sahalkaaga tag xarunta Golis ee kuugu dhow.
Buuxi foomka is diiwaan gelinta
Kadibna furo akoonkaaga (activate it)
Buuxi foomka is diiwaan gelinta:
Waxaa lagaa rabaa inaad buuxiso foomka isdiiwaan gelinta, kuna qorto numberka mobilekaaga, magacaaga oo dhamaystiran, taarikhda aad dhalatay iwm. Waxaa kaloo lagaa rabaa inaad keento ama la timaado sawir ah nooca baasaboorka, hadii aadan markaa wadan sawirka Golis ayaa kaa qaadeysta isla goobta marka waxba ha welwelin.
Fur ama activate akoonkaaga Sahal
Golis waxay kuu soo diraysaa maseej kuu sheegaysa in isdiiwaan gelintaadu ay meel martay. Kadib fur akoonkaaga Sahal adiga oo isticmaalaya 4ta number ee Start Key kaas oo ay Golis kuu soo dirtay, adiga oo sidatan u samaynaya:
1. Garaac(Dail)*888# kadib taabo OK.
2. Geli marka Start Keyga (afarta number ee golis kaaga timid), markaa kadib akoonkaaga wuu shaqeynayaa waana kuu furan yahay ee isticmaal.
Sahal waxaad u adeegsan kartaa howlahaan hoos ku qoran oo dhan:
Inaad lacag dhigatid kaash ah akoonkaga
Inaad lacag dirto oo qof kale u gudbiso
Inaad lacag kala baxdo
Inaad telefoonka lacag kaga shubato ama daqiiqado aad ku iibsato
Inaad bixiso biilasha
Inaad aragto balansiga kuugu haray Sahal
Inaad maamusho akoonkaga Sahal
1. Dhigo lacag akoonkaaga.
Si aad wax ugu gadato Sahal waa inaad lacag ku shubataa akoonkaga Sahal aadna kaga shubataa Xarumaha Golis mid ka mid ah, kadibna way kuu samaynayaan iyagoo isticmaalaya borogaraamka Sahal
Si markaa aad lacag ugu shubato sidaan yeel:
Tag Xarumaha adeega Sahal mid ka mid ah adiga oo wata telefoonkaga iyo lacagtii aad ku shuban lahayd.
Lacagta aad ku shuban lahayd u dhiib shaqaalah Golis ee xarunta ka adeegaya
Sistemka ayey adeegsanayaan si markaa lacagtaadii kaashka ahayd ay kuugu shuban iyadoo e-money ah akoonkaaga Sahal.
Waxaa markaa kuu soo dhacaysa maaseej SMS ah oo kuu sheegaysa in lacagtii laguugu shubay akoonkaaga ayna kuugu jirto.
2. Dir lacag (Transfer) money
Waad diri kartaa lacag waxaadna u diri kartaa qof kasta oo haysta telefoon Golis ah xataa hadii uusan asagu Sahal haysan. Si aad lacag u dirto marka waa inaad marka hore lacagta ku shubataa akoonkaaga sahal adigoo isticmaalaya sida aan kor kusoo sheegnay. Si lacagta u dirto:
Garaac (Dial) *888# kadib taabo OK
Kadib geli numberkaaga afarta ah ee aad leedahay the PIN number(4 digit key)
Dooro dir lacagta ‘Send Money’
Dooro inaad rabto inaad lacagta u dirto qof Sahal haysta ama qof aan Sahal haysan.
Geli telefoonka qofka lacagta aad u dirayso kadibna ku celi intoo kale si aad u hubiso.
Geli lacagta tiradeeda aad doonayso inaad dirto kadibna ku celi intii oo kale si aad u hubiso.
Waxaad muraayada ka arkaysaa qoraalkii aad gelisay oo dhan,
(tusaale ma hubtaa inaad dirtay USD $ 200 to to 90722929) .
Xaqiiji hadey saxtahay kadibna taabo OK.
Adiga iyo qofka aad wax u dirtay waxaad helaysaan maaseej kuu sheegaysa lacagtii aad dirtay.
Hadii aad lacag number khaldan u dirto:
Wac (Call Line 822229) isla markiiba una sheeg telefoonka lacagta khaldani ku dhacday.
Lacagta ku dhacday telefoonka khaldan waxaa lasoo celin karaa hadii lacagtii weli ku jirto akoonkii khaldanaa.
Hadii lagu guulaysto in lacagtii laga dabatago waxaa kuu imanaysa maaseej SMS kuu sheegaysa in lacagtii la soo celiyey
3. Labixid lacag
Waad kala bixi kartaa Xarun kasta oo adeega Sahal ah lacag (withdraw money)
(a) Hadii aad diiwaan garaysan tahay Sahal akoona leedahay
Aad ama tag Xarun Sahal(sahal Store) kadibna:
Weydii istoorka inuu hayo lacag ku filan inta aad rabto.
Garaac (Dial *888# kadib taabo OK
Geli Pin numberkaaga (4 digit key)
Geli numberka istoorka, kadibna geli tirade lacagta aad rabto inaad la baxdo.
Waxaad arki doontaa tirada lacagta aad dalbatay muraayada telefoonka, marka xaqiiji inay sax yihiin kadibna taabo OK.
Waxaad heli doontaa maaseej SMS ah oo kuu sheegaysa in lacagtii aad la baxday.
Kadibna qofka istoorka jooga ayaa ku siinaya lacagtii aad dalbatay oo kaash ah, kadibna wuxuu ku weydiinayaa inaad buuga u saxiisdo kaas oo ah kan lagu keydiyo wixii lacag ah ee ka baxa istoorka ay Sahal leedahay.
b) hadii aad tahay qof aan diiwaan gashanayn,
Tag Sahal Istoor Kadibna:
Xaqiiji marka hore in istoorka lacag ku filan hayo inta aad u baahan tahay.
Tus maseejka SMS ee muujinaysa foojarka Sahal number (notification confirming receipt of cash)
Sii telefoon numberkaaga iyo wixii kale ee cadeynaya adiga nafsadaada.
Istoorka marka wuxuu gelinayaa koodhka ‘one time code’ kaas oo ka soo muuqda maseejka macmiilka soo diray.
Waxaad heli doontaa maseej SMS ah oo sheegaysa in kala wareejintii dhacday.
Kadib istoorka wuxuu ku siinayaa lacagtaadii kadibna waxaad u saxiixaysaa log buuga istoorka oo ah xisaabta Sahal ee istoorkaas. Markii aad lacag u dirto qof aan ka diiwaan garaysnayn Sahal waxay helayaan foojar hal mar ah kaas oo wata afar number oo code ah kaas oo ay u isticmaalayaan inay lacagta kula baxaan. Hadii aan SMSka la helin ama si kama ah loo tirtiro weydii inay wacaan isla markaas Call line 822229 weydiisana in foojarkii dib loo soo diro mar kale.
4. Gado Airtime Golis ah.
Maadaama aad tahay macmiil Sahal leh waxaad gadan kartaa Airtime ama daqiiqado aad ku hadasho oo kala ah ilaa $0. 25 – $ 100 oo aad foonkaaga u isticmaasho ama qof kale foonkiisa. Sahal qiimaheedu wuu ka duwan yahay kan Airtimeka.
Garaac Dial *888# kadib taabo OK
Geli PIN number kaaga (4 digit key)
Dooro ‘Buy airtime’
Dooro hadii aad rabto inaad adigu gadato daqiiqada iyo hadii aad u rabto qof kale.
Geli numberka aad u rabto inaad Airtimeka u gado.
Geli inta lacag aad rabto inaad iibsato Airtime ahaan.
Xaqiiji macluumadka si aad u hubiso in wax kala gadashadu saxtahay iyo in kale kadibna taabo OK.
Waxaad helaysaa maseej cadeynaysa waxad iibsatay oo Sahal ka timi.
5. Bixi biilasha
Dadka ka diiwaan gareysan Sahal hada waxay bixin karaan biilasha Postpayga iyo kuwa kale oo badan oo ah Shirkado Sahal howl wadaag la ah. Lacagta ugu badan ee maalintii laga bixin karo Sahal waa US$ 10,000 inta ugu badan ee laga bixin karo halkii marba waa US$ 2,000.
(a) Si aad u bixiso lacagta Golis ee Biilka telefoonka:
Waa inaad akoon ku leedahay Sahal.
Ay kuugu jirtaa akoonkaaga Sahal lacag ku filan inta aad bixinaysid.
Garaac (Dial *888# kadibna taabo OK
Geli Pin numberkaaga(4 digit key)
Dooro ‘Pay Bill’ Menuga Sahal kaaga
Geli ganacsadaha aad lacagta siinaysid biilka ah tusaale sidan oo kale. 422000
Geli lacagta aad rabto inaad bixiso (inta u dhaxaysa US$ 1 – US$ 2,000)
Hubi inuu saxyahay waxaad qortay kadibna taabo OK
Akoonkaaga Golis ee aad lacagta u shubtay saacad gudaheed lacagtii waa ku jirtaa.
(b) Si aad u bixiso biilashaada kale:
Waa inaad akoon ku leedahay Sahal. Ay kuugu jirtaa akoonkaaga Sahal lacag ku filan inta aad bixinaysid
Dooro ‘Pay Bill’ Menuga Sahalkaaga
Geli numberka ganacsiga ‘business number’ ee shirkada aad lacagta siinaysid*
Geli ‘account number’ ee biilka aad rabto inaad bixiso*
Geli tirade lacagta aad rabto inaad bixiso (inta u dhaxaysa US$ 1 – US$ 2,000)
Geli PIN kaaga Sahal
Hubi inay waxaad gelisay saxyihiin kadibna taabo OK
* Hubi in shirkada aad lacagta biilka siinaysid ay ogoshahay in Sahal lacagta lagu siiyo iyo in kale inta aadan lacagta xawilin. Waxay marwalba ku siinayaan numberka ganacsigooda iyo akoon numberka ku haboon inaad lacagta biilka ku bixiso. Waxay kaloo kuu sheegayaan hadii ay jiraan lacag ay kugu dalacayaan isticmaalka Sahal ama lacag ku bixinta qaabka Sahal iyo in kale.
6. Muuji Balansiga:
Waad hubin karta inta lacag kuugu jirta Sahal akoonkaaga adiga oo bixinaya lacag yar oo ah 1/=. Waxaad kaloo ogaataa in balansigaaga marwalba lagugu soo diro SMS markasta oo aad lacag ka bixiso akoonkaaga iyo markii aad ku ridataba.
Si aad u eegto balansigaaga:
Dooro “show balance”
Geli PIN numberkaaga
Sug SMS maseej ku sheegaysa balansiga intay kuu soo dhacayso.
Dalbo caawin: Waad soo wici kartaa qaybta caawinta macaamiisha ee Sahal adigoo adeeg sanaya menugaan::
Dooro “Call Support”
Waxaa kuu soo baxaysa maseej dhahaysa “Allow sim card to call?”
Adeegan naftiisa waxaad ku heli kartaa adiga oo garaacaya 822229 mobile kaaga Golis adoo isticmaalaya.
7. Maamulida akoonkaaga Sahal
Waad maareyn kartaa akoonkaaga Sahal adigoo adeesanaya menuga telefoonkaaga:
Bedel PINka : Si aan lagaaga xadin bedel PINkaaga markasta oo aad u baahato adigoo aan lacag lagugu dalaceyn.
Menuga Sahal dhexdeeda dooro “My Account”
Dooro “Change PIN”
Geli PINkii hore dabadeedna taabo OK
Geli PINka cusub kadibna confirm dheh
Sug inta lagaaga sheegayo inuu bedelmay.
Luuqada: – Waxaad dooran kartaa luuqada aad rabto inaad Sahal ku isticmaashol:
Menuga Sahal ka dooro “My account”
Dooro Somali ama English
Luuqadii aad dooratay ayaa soo baxaysa.
Soo sheeg haduu dhumay – Waad soo sheegi kartaa Sahal hadii telefoonka kaa dhumo:
Dooro “Report Lost”.
Geli numberka kaa dhumay.
Geli numberka dhumay PIN kiisa
Sheegidii waa gudubtay.
Taaj waa xawaalad ka shaqaysa guud ahaan dunida dacaladeeda waxay dheertahay xawaaladaha kale in lacagtaada ay kuugu so dhacayso.
Adeegga Internetka (Internet Services)
Golis telecom offers high speed internet throughout Puntland state of Somalia to both home users and businesses. Our internet service gives you experience and convenient way to access internet anytime and anywhere.
Experience both mobile and DSL internet anytime anywhere in a reasonable price offered by Golis Telecom. The speed of service various depending on the tariff you are on.
Uses the only fixed ADSL technology
Offered through the Golis fixed service line
A bundled offering on internet and voice
Unlimited offer subject to fair usage policy
Total Volume to be downloaded
128kbps 7GB $40
256kbps 15GB $80
512kbps 30GB $160
1mbps 60GB $300
Unlimited Broadband for as low as 10$ per month
Up to 2MB speeds of data
Customers can migrate from the old offerings to the new surf and talk
Option to get a static IP address
Waxaad Shirkadda Golis ka helaysaa Adeego kale oo ay ka mid yihiin Baaq, Afgarad, Ila-Hadal, Illa Wa-daag, Adeeg Koronto oo ku qanciya, qiimihiisana aad ku qancayso, Landline Service iyo Adeegyo kale.
Wixii Faahfaahin ah Booqo Webka Shirkadda http://www.golistelecom.com
Golis waa u Adeegaha Shacabka Soomaaliyeed, golis waa caawiyaha dadkeena, Golis waa hormuudka Isgaarsiinta Gayigeena, Golis waa haqabtiraha bulshada, markasta iyo meelkasta Golis.